5.3 Xeerarka soo koobidda tirooyinka
Marka la soo koobaayo tiro caadi ah waxaa loo soo koobaa tobnaadka, boqolaadka ama kumaadka ugu dhaw.
Waxaan dhawr tusaale ku muujineynaa xariiqda tirada ee soo socota:
Haddii aan haysanno tirada 17 oo aan ku soo koobeyno tobnaadka ugu dhaw, marka aan tirada 17 ku muujineyno xariiqda tirada waxaan arkeynnaa in tiradaasi ay u dhaw dahay 20. Sidaas daraadeed waxaan tirada 17 ku koobeynaa 20.
Waxaan soo qaadaneynaa tusaale kale:
Ku koob tirada 320 boqolaadka ugu dhaw. Marka aan tiradaasi 320 ah ku muujinno xariiqda tirada, waxaan arkeynaa in ay u dhaw dahay 300, marka lala barbardhigo 400. Sidaas daraadeed waxaan tirada 320 ku koobeynaa 300.
Tusaalaha saddexaad ee ugu dambeeya waa mid ka adag kuwii hore:
Ku koob tirada 55 tobnaadka ugu dhaw. Waxaan aragnnaa in tirada 55 ay ku taalo meel u dhaxeysa tirooyinka 50 iyo 60. Xeerarku waxay leeyihiin waa sax haddii midkood lagu soo koobo, balse waxaa laysku raacay in lagu soo koobo 60.
1. Ku koob tirada 346 tobnaadka ugu dhaw.
Markaas waxaan eegeynaa tirada ka dambeysa 4 oo ah 6. Waxaan markaas ku soo koobeynaa 350.
2. Ku koob tirada 855 boqolaadka ugu dhaw.
Waxaan aragnaa in tirada tobnaadka ah ee ku jirta 855 ay tahay 5. Markaas waxay jawaabtu noqoneysaa in tiradan 855 lagu koobo 900.
3. Ku koob tirada 243 579 toban kumaadka ugu dhaw.
Waxaan halkan ku aragnaa in tirada ku jirta godka kumaadka ah ay tahay 3, markaas waxay jawaabtu noqoneysaa 240 000.